Daboolida geedaha g Birta iyo dhagaxa dhir bir bir ah • MAGAALADA MAGAALADA
hadda naqshadaha yaryar ee magaalooyinka sidoo kale daboolida geedka. Waxyaabahan shaqeynaya iyo qurxinta ayaa lagu sameyn karaa agab kala duwan.
Dhirtii joogtayna booska magaalada waxay dammaanad u tahay caafimaadka dadka deggan, nasashada iyo dareenka bilicsanaanta ee dadka ku nool agagaarka cagaaran. Dhirtu waxay nadiifisaa hawada, waxay soosaartaa oksijiin, waxay hoos u dhigtaa heerkulka jawiga ah maalmaha kulul, waxay kordhisaa qoyaanka hawada, waxay hagaajisaa maareynta biyaha oo waxay yareysaa buuqa magaalada iyo xoogga dabaysha.
Si kastaba ha noqotee, si ay ugu koraan una koraan si habboon, waa in laga ilaaliyaa dhacdooyinka waxyeellada leh ee burburin kara.
Taasi waa sababta daboolida geedka loo adeegsado si isa soo taraysa, taas oo ku habboon kaliya kuma eka gudaha jardiinooyinka iyo labajibaaranaha, laakiin sidoo kale meeleefyada iyo xarumaha magaalada.
Daboolida ayaa ka difaacda geedaha xayawaanka, lugeeyayaasha iyo gawaarida korkooda.
Daboolida geedaha iyo biraha iyo weelasha birta ee lagu tuuro
Daboolida geedaha iyo ubaxyada geedaha birta iyo birta-birta waxay abuuraan difaac qurxinta dhirta ku taal ma ahan oo keliya meelaha banaan magaalada, laakiin sidoo kale jardiinooyin.
Waxaa lagu soo saaray cabbirro iyo qaabab kala duwan.
Daboolida geedka birta leh waxay leeyihiin qaab qurux badan iyo naqshado casri ah oo ku habboon meel kasta oo magaalada iyo nawaaxigeeda ah.
Ilaalada geedaha loogu tala galay ilaalintooda waxay noqon karaan kuwo toosan ama toosan.
Daboollada, oo loogu talagalay inay ahaato mid toosan, i.e. geedaha geedka, waxay ka ilaalinaysaa nidaamka xididka geedka wax kasta oo waxyeello farsamo leh ah, iyadoo la xaqiijinayo socodka biyaha oo bilaash ah.
vertical daboolida geedka waxay qabtaan shaqooyin ilaalin ah oo qurux badan, iyagoo hubinaya koritaanka bilaashka ah ee dhirta iyagoon wax khatar ah uga imaan kuwa ag mara, baabuurta iyo xayawaankaba.
Eeg sidoo kale: Dheriga Beerta iyo maaddadooda - midkee ayaa ugufiican?
Qaabka saxda ah ee daboolida geedka la adeegsaday ayaa ka dhigaya qayb ka mid ah qaab dhismeedka yaryar ee qurxinta booska magaalada.
Daboolida birta ee shaqeynaya iyo quruxda badan ee geedaha ayaa ah badbaado aad uqurux badan oo loogu talagalay geedaha, waxayna uga mahadcelinayaan qaababkooda iyo midabyadooda casriga ah, waxay u noqdeen qurxinta meelaha dadweynaha.
Daboolida geedka ilaa naqshadaha yaryar, taas oo si guul leh uga jirta horumarka magaalada, halkaas oo dhirta cagaaran ee magaalooyinka loo adeegsaday meel xaddidan, oo ah qurxin dabiici ah oo ka kooban isku xirnaanta suuqyada iyo isgaarsiinta.
Daboolida birta ee geedaha waa xalal bilicsan oo ilaaliya dhirta magaalada, laakiin waqti isku mid ah u oggolow qulqulka biyaha bilaashka ah nidaamka xididka.
Geedaha magaalada ayaa si gaar ah ugu nugul burburka, kaliya ma ahan waxyeelo kiimiko ah, waxaa sababay, tusaale ahaan, qiiqa gawaarida xad dhaafka ah, laakiin sidoo kale waxyeelo farsamo. Markaa waxay u baahan yihiin daryeel gaar ah. Sidaa darteed, meelaha leh xaddidan xadidan iyo gaadiid culus iyo socodka dadka lugeeya, meelaha cagaaran ee magaalooyinka waa in si gaar ah loo ilaaliyaa. Daboolka geedka ku habboon wuxuu ka ilaaliyaa geedka kaliya kama soo horjeedo burburin, laakiin wuxuu kaloo ka hortagaa arrimo kale.
Xuduudaha horjoogga ah iyo daboolka toosan ee ka samaysan birta iyo birta ayaa si aad ah ugu adkaysata arrimaha dibedda iyo dhaawaca farsamo, sidaa darteed waxay si fiican u ilaaliyaan geedaha. Waxyaabaha lagu daboolo geedaha, oo si habboon loogu waafajiyay geedaha iyo meelaha magaalooyinka, waa qurxin dheeraad ah oo goobta ah.
Qaabka caadiga ah ama kan casriga ah ee geed iyo xirmooyinka dusha sare waxay ku habboon yihiin dabeecadda boos bannaan oo magaalada ah.
Eeg sidoo kale: Xaashiyaha dayrka
Ilaalada geedaha toosan ayaa sidoo kale loo isticmaalaa jardiinooyinka guryaha iyo geedaha, halkaas oo ay si wax ku ool ah uga ilaashadaan geedo midho leh waxyeelada ay ka dhashaan xayawaannada jilifinaya jilif ama caleemaha geedaha. Daboolida geed midho leh sidaa darteed waa muhiim sida magaalooyinka kale, maxaa yeelay waxay xaqiijinayaan badbaadada dhirta ee jardiinooyinka iyo xanaanooyinka.
Mararka qaarkood ciyaarta cayaaraha duurjoogta ah ama geedka cawsduurka ugaarta cawsdu waxay waxyeelleeyaan geedaha si aan kala sooc lahayn, gaar ahaan tijaabooyinka ugu yar. Daboolida geed ee munaasib ah waxay u oggolaaneysaa inay si deggan ugu koraan.
Daboolida geedo leh godad yaryar ayaa iskood isu muujin doona gaar ahaan xilliga jiilaalka, marka haro iyo deeradu ay raadinayaan cunto oo ay si xamaasad leh ugu qulqulayaan geedaha jardiinooyinka. Daboollada noocan oo kale ah waxay geedka siin doonaan hawo hawo iyo iftiin ku filan, isla mar ahaantaana waxay ka hortageysaa xayawaanka in ay waxyeeleeyaan jirridda geedka.
Si aan loo dhaawacin xididada geedaha miraha iyo geedaha ornalka ah inta lagu jiro goynta, waxaa habboon in la isticmaalo daboolida geedka oo daboola xididada isla markaana xannibaya koritaanka cawska ku wareegsan geedaha.
Daboolida geedku waxay noqdeen wax soo noqnoqda oo ka ilaaliya dhirta dhirta iyo meelaha cagaaran ee magaalooyinka ka dhanka ah waxyeelada farsamada. Dabeecadaha ka sokow, noocyada kala duwan ee geedaha geedku waxa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo nidaamka xididka geedka dhaawaca iyo in la hubiyo in biyuhu biyo galaan.
Eeg sidoo kale: Qormooyin la taaban karo
Fasaxyada geedo alwaax ahDhirta geedqiimaha gogosha geedjardiinada geed aasaybirla'aan bir ah geedahaalwaaxyo bir ah geedahatuur macdanta birta ee qiimaha geedahahoy yar oo dhismeedka geedahadaboolida biraha geedahaxirmooyinka geedka macdanta birtadaboolida geedkadillaacyada geedaha alwaaxidaxargaha geedaha castoramaqiimaha goynta geedkadareey merlin geesahadaboolida geedaha buluugga ahfaleebo loogu talagalay geedaha obidaboolida geedaha olxantafaleebo geedo midho lehfaleebo geedo midho leh Allegroqiimaha miraha geedka mirahaiibinta miraha geedkasoo saare geeddaboolida geedahamesh daboolida geedahaIlaalada geedaha iyo birta iyo weelasha birtadaboolida biraha geedahadaboolida geedkageedku wuxuu daboolaa qiimahageedku wuxuu daboolayaa dhismeyaasha yaryardaboolida geedo midho lehdaboolida geed daboolanQiimaha goynta geedka dillaacaydaboolida geed jabandaboolida geed bir ah
Meel casri ah oo lagu cayaaro waxay u oggolaaneysaa madadaalo aan xaddidneyn oo ammaan leh hawada furan maahan oo keliya carruurta da 'kasta leh, laakiin sidoo kale dhalinyarada. ...